Nagu saabsan - Masaf Of The Day
Waad ku mahadsan tahay booqashada our Funneloftheday.com Site! Waxaan ognahay in aad ka faa'iidaysan doonaa ka dhan macluumaadka laga heli karaa halkan. Waxa kale oo aad ogaan doonaa runta ku saabsan tiro ka mid ah oo caan ah (laakiin khuraafaadka khalad) marka ay timaado ololeeyaan qalabaynta.
Waxaan abuuray website this si uu u muujiyo my opinion on faa'iidooyinka qalabaynta ololaha iyo dadka caawiyaan go'aan xog si ay u bilaabaan ama u koraan iyagoo online ama ganacsiga maxaliga ah. si guul ah. Sababtoo ah waxaa jira fiisa aad u badan oo ku saabsan internetka iyo macluumaad aad u badan maalmahan, waa run ahaantii way adag tahay in la ogaado waxa ay dhab ahaantii ka shaqeeya.
Waxaan la gooyaa marayo Crore oo dhan oo wuxuu ku muujiyey xaqiiqooyinka ay kaa caawin doona inaad go'aansato.
Ogaaw in aad xor in ay dhex maraan our website
P.S. Haddii aad rabto this site oo aad rabto macluumaad dheeraad ah, waxaan aad ugu boorinayna in aad la xiriirto ama la wadaagno in ay saaxiibadaa! sidoo kale Waxaa iyaga ka caawin kartaa!